septembre 2018 - Page 3 sur 85 -
Lalana Tsarasaotra-Ivato : Atolotra amin’ny volana novambra
29/09/2018 admintriatra 0
Ao anatin’ny fanamboarana tanteraka ny lalana Tsarasaotra Ivato, izay mirefy 11 km. Vola mitentina 448 Tapitrisa Dolara no hanatanterahana ny asa, vola nindramina amin’ny banky Sinoa, Exim Bank ary ny orinasa China Harbour Engineering Company …Tohiny
«Miverina indray ny fahiny… »
Tsy misy hafa tamin’ny tranga niseho ny 26 janoary 2009 ny tranga tany Morondava, tamin’ity herinandro ity. Sady norobaina mantsy ny tanàna, no nisy ihany koa ny fandorana taorian’izay. Tsy hafa fa mbola ny solombavambahoaka …Tohiny
Antananarivo Renivohitra : Voamarina ny fisian’ny pesta
Ny talata lasa teo dia namoaka vaovao ny minisiteran’ny Fahasalamana, fa nahitana trangana pesta teto Antananarivo Renivohitra, ary olona iray no noahiahiana ho voan’ny aretina tamin’izany. Mba hanamarihana izany, nisy ny fitiliana nataon’ny minisitera teny …Tohiny
30 taona an-tsehatra : Bodo hamintina ny lalana nodiaviny
Nandalo ny mangidy sy ny mamy. Ho fintinin’i Bodo mandritra ilay seho « Fiderana aloha » ny lalana nodiaviny tao anatin’ny 30 taona nidirany teo amin’ny sehatry ny mozika. Hosantariny tamin’ny fiandohany tao amin’ilay fifaninanana TOP 16 …Tohiny
Ao anatin’ny fotoan’ny hain-tany tanteraka ny mponina any amin’ny faritra Atsimo amin’izao fotoana izao. Voakasik’izany manokana ny any amin’ny faritra Androy. Tsy mitazam-potsiny izany fahasahiranan’izy ireo izany anefa ny fitondram-panjakana fa nitondra fanampiana tamin’ny alalan’ny ...Tohiny
Minisitra vaovao telo no nampidirina : Nohatsaraina ny governemanta Mahafaly Olivier